ဗြိတိသျှစည်းမျဉ်း! - ဝီကီပီးဒီးယား
ဗြိတိသျှစည်းမျဉ်း! သည် မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ် တက်ကြွစေသော သီချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပြီး ဂျိမ်းသွန်မ်ဆင် ရေးသားသော မူလ "ဗြိတိသျှစည်းမျဉ်း" ကဗျာပါ စာသားများဖြင့် သောမတ်စ်အန်းနာ မှ၁၇၉၀ခုနှစ်တွင် ဖန်တီးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။  ဤသီချင်းသည် ဗြိတိန်တော်ဝင်ရေတပ် အထူး ပတ်သက် ဆက်နွယ်သော သီချင်း ဖြစ်သော်လည်း ဗြိတိသျှစစ်တပ် တွင်လည်းအသုံးပြုကြသည်။ 
အဲဖရက်မ ကို-ရေးထားသည့်သွမ်ဆင်နှင့်ဒေးဗစ်မဲလတ်တို့ပထမဦးဆုံးအနေဖြင် ကလိုက်ဗဒန်၌ ဖျော် ‌ဖြေ အိမ်ပြန်ခရီးအားရေးသားသည့်ဖရက်ဒရစ်, ဝေလမင်းသား (သားအကြီးဆုံး ဂျော့ချ် နှင့်နောင်တွင် ဂျော့ချ် ၏ဖခင်၊ ဘုရင်မဗစ်တိုးရီးယား၏အဖိုး) သည် ၁၇၄၀ ဩဂုတ်လ ၁ ရက်နေ့တွင်ဂျော့ချ် နှင့် ဩဂတ်စတာမင်းသမီး ၏တတိယမြောက်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ကိုကျင်းပရန်။  
↑ The Oxford Companion to Music (tenth Edition)။
↑ Rule Britannia (2002)။ 16 July 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ James Thomson and David Mallet, Alfred,aMasque, 1740, p.42
↑ Scholes p. 897.
Wikimedia Commons တွင် Rule, Britannia! နှင့် ပတ်သက်သော မီဒီယာ ရှိသည်။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဗြိတိသျှစည်းမျဉ်း!&oldid=499433" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၂ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၀၊ ၁၄:၅၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။